युगसम्बाद साप्ताहिक - जातिभेद मान्ने कम्युनिष्ट नेपालमै निस्के - महेश्वर शर्मा
Sunday, 04.05.2020, 09:11pm (GMT+5.5) Home Contact
जातिभेद मान्ने कम्युनिष्ट नेपालमै निस्के - महेश्वर शर्मा
Wednesday, 10.02.2013, 01:23pm (GMT+5.5)
विगत एक दशकमा देशमा जेजति अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार देखिएको छ, त्यति कहिल्यै भएको थिएन । तर त्यस बिरुद्ध दह्रो आवाज उठाउने कोही भएन, किन होला ? भनेर हालै एउटा जमघटमा एकजनाले प्रश्न उठाएका थिए । त्यसको जवाफमा एकजनाले– “विरोध गर्न सक्नेहरू सबै शासन सत्तामै गैहाले, अब कसले विरोध गर्ने ? तिनैका भातृसंगठन भनिएका ट्रेड यूनियनहरू, दादा, डन, झ्यापुल्ले, मुन्द्रेहरूलाई शासनकहरूले पालेकै छन् । उनीहरूलाई लुटेर खाने स्वतन्त्रता दिएकै छन् । अनि कसरी सरकारका मनपरी र सामाजिक आर्थिक भ्रष्टाचारको खोजी हुन्छ ? यसरी विरोध गर्न सक्नेहरूकै मुखमा बुझो लगाइदिएपछि कसले विरोध गर्ने ?”
हुन पनि हो– प्रतिदिन महंगी बढ्दो छ तर कोही बोल्दैन । सरकारमा हुनेलाई खाँचो छैन, अरु को बोल्ने ? सरकारकमा हुनेहरू र दलका नेताहरू जे भन्छन् काम चाहिं ठीक उल्टो गरिरहेका छन्, तर विरोध कतै छैन । लोकतन्त्र र गणतन्त्रका नारा भट्याउँछन्, तर काम चाहिं निरंकुशतालाई पनि उछिन्ने खालको छ । स्वार्र्थसिद्ध हुन्छ भने छिनछिनमा भाका फेर्न पनि बेर मान्दैनन् । त्यसमा पनि सत्ता प्राप्तिका लागि त जस्तोसुकै अपराध कर्म गर्न पनि संकोच मान्दैनन् । राष्ट्रिय एकताको मर्मलाई तिलाञ्जली दिएर उग्र जातीयताका पक्षमा उभिएको पनि देखिएकै छ । जनपक्षीय आदर्श परम्परालाई नै लत्याएर उल्टो दिशातिर फर्काउन खोज्दैछन् । बेरोजगारी र जनताका अरु समस्याको निराकरण गर्नु सट्टा आफ्ना भातृ संगठनलाई लुटपाट, तोडफोड, बन्द, हड्ताल गर्न लगाएर बहादुरी देखाउँदैछन् । हरेक कुरालाई जात र धर्म सम्प्रदायसंग जोडेर समाजमा द्वन्द्व निम्त्याउने काम गर्दैछन् ।
सम्झौतापछि मओवादीको विध्वंश थामिएको सम्झेर जनतामा आशा जागेको थियो तर उनीहरू सत्तामा अएपछिका उच्छृङ्खल क्रियाकलाप (जात, धर्म र प्रान्तका आधारमा फाटो पार्ने) देखेर जनता झन् निराश भएका छन् । माओवादीहरू विजय उन्मादमा जनतालाई बलजफ्त दबाएरै निरंकुश शासन चलाउन चाहन्छन् भन्ने कुरा उनीहरूकै ध्वाँस र धम्कीबाट बुझ्न सकिन्छ । ‘कहीं नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा’ उखान चरितार्थ पार्दै जातिभेद मान्ने कम्युनिष्ट त नेपालमा मात्रै निस्के । जनइच्छा विपरीत गएर क्षणिक स्वार्थ पूरा भए पनि त्यो दीर्घकालमा आफ्नै लागि अनिष्ट हुने सम्झेका छैनन् । हुन त जनताको विश्वास जित्नुभन्दा बलजफ्त सत्ता कब्जामा विश्वास गर्नेलाई जनसमर्थनको त्यति आवश्यकता नपर्ला, तैपनि संसदीय व्यवस्था मान्ने भनेर आइसकेपछि पनि तानाशाही प्रवृत्ति देखाइरहनुबाट शंका यथावत नै रहेको छ ।
हठवादी नेताहरू जनतालाई सार्वभौम बनाउने भाषण गर्छन् । त्यो भनेको सम्भवतः जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने भन्ने होला, तर व्यवहारमा हेर्ने हो भने जनता कहिल्यै पनि अधिकारसम्पन्न हुन पाउँदैनन् । त्यो अधिकारको प्रयोग केही टाठाबाठाले मात्र गर्दैआएको इतिहास छ । जनता त भ¥याङ मात्रै हुन्छन् बेइमान, टाठाबाठा र ठूलाठालूलाई माथी उकास्ने । संसारमा कुन निमुखाले प्रजातान्त्रिक अधिकार उपभोग गर्न पाएको छ पाँच वर्षमा एकपटक अरुकै इशारामा एउटा मत दिन बाहेक ? पुष्पकमल दाहाल र उनका महलमा भाँडा माझ्ने, लुगा धुने मान्छेकै स्थिति तुलना गरे हुन्छ । यही हो त जनवाद या गणतन्त्र अथवा सर्वहाराको शासन ? नेताका लहैलहैमा सडकमा टाउको फुटाइमाग्ने एकथरि हुन्छन्, तिनैका आन्दोलनका भरमा प्राप्त अधिकार उपभोग गर्ने अर्कैथरि निस्कन्छन् । एकथरिको तानाशाहीको विरोधमा नेताले जनतालाई सडकमा उतार्छन् र आफू सत्तामा पुग्छन्, तर उनले पनि पूर्ववर्तीकै बिंडो थाम्छन् र अनि ती सडकछापलाई अर्काथरिले उचाल्छन् र आन्दोलन गर्न लगाउँछन् अनि तिनले पनि आफ्नै दुनो सोझ्याउँछन्, जनताको दुर्नियति चाहिं जस्ताको तस्तै रहन्छ ।
त्यसैले प्रजातन्त्रमा जनता बलिया हुन्छन् भनेर कसरी पत्याउने ? बलिया त जहिले पनि नेता र सत्ताधारी मात्रै भएका हुन्छन् । यही हो सबैतिरको यथार्थ । त्यसकारण ‘आफैं नमरी स्वर्ग देखिंदैन’ भनेझैं प्रत्येक व्यक्ति स्वयं सचेत र जागरुक नभएसम्म यो राजनीतिक ठगीधन्दा रोकिदैन । मान्छेको उत्थान र पतन आफ्नै हातमा हुन्छ । जनता आफैं जाग्नुपर्छ, अर्काको भरले मात्रै हुँदैन । जनतालाई उठ्न दिने वातावरण तयार पारिदिने काम दलहरूको हो, नेताहरूको हो तर खोई ? जता हेरे पनि र जहाँ गए पनि तलका टाउकामा टेकेर माथिकाले मोज गर्ने विपरीत क्रम चल्दैआएको छ । त्यसमाथि थप नेपालमा जातीय विद्वेष फैलाएर आत्मघात गराउन खटिएका आईएनजीओलाई प्रश्रय दिएर सरकारले नै आफ्ना खुट्टामा आफैं बञ्चरो हान्ने काम गराइरहेको छ । प्रत्येक नेपाली स्वयं शतर्क रहनुपर्ने अवस्था छ आज ।
आज यहाँ राजनीतिक तमाशा छ । नेताहरू दुनियालाई आफ्नै नालायकीको प्रदर्शनी देखाइरहेका छन् । विदेशीहरू त्यही तमाशा हेरिरहेका मात्र होइन, उपदेश पनि दिइरहेका छन् । भारतबाट आउने एउटा सचिव (कर्मचारी)ले पनि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलाई सजिलै भेटेर मन्त्रदान गरेर छोड्छ आफ्ना स्वार्थका कोणबाट । यहाँको विग्रेको परिस्थितिलाई आफ्नै अनुकूलतामा ढाल्न नेतालाई लोभ्याइरहन्छन् । यस्तो अवस्थामा पनि दुर्भाग्य के भने नेताहरू देश हेर्न बिर्सन्छन् । क्षणिक स्वार्थ मात्र हेर्छन् । कोही भन्छन्– दुई तिहाई नपुगेर संविधान बनाउन सकेनौं, अबको चुनावमा दुईतिहाई दिनोस् संविधान बनाइदिन्छौं । अर्काथरि पनि त्यसै भन्छन्– हाम्रो पार्टीले बाहेक अरुले जनताको संविधान बनाउनै सक्दैन । यसरी ठगी धन्दाको अर्को चरण सुरु भएको छ । नयाँ नारा सुनेर जनताले पुराना बेइमानी बिर्सन थालेका छन् । ‘पहिले काम देखाउन अनि भोट माग’ भनेर अडिनुपर्नेमा झूटा आश्वासनका भरमा जनता फेरि ठगिन सक्छन् । जनताको बिर्सने बानी र अज्ञानताको फाइदा पटकपटक लुटिरहेका छन् ।
यहाँ कस्तो विडम्बनापूर्ण स्थिति छ भने नेता बेपत्ता धनी छन्, तर जनता बेपत्ता गरीब । किन यस्तो ? हामी किन गरीब भयौं, कसले हामीलाई गरीब बनायो ? भनेर सोच्नेसम्म शक्ति जनतामा छैन । जनता भनेर नगण्य शहरिया, सुकिला–मुकिला होइन, अनकन्टार गाउँका जनतालाई सम्झनुपर्छ जो निरक्षर छन्ु, निष्पट अन्धकारमा छन् र एकछाक रोटो पिठो जुटाउन पनि धौ धौमा छन् । जनताको गरीबीको यो स्थिति रहिरहने हो भने भोलि धनी नेताले पनि सुख पाउने छैनन् । समाजमा रोग व्याप्त छ भने नेता मात्रै सधैं निरोग रहन सम्भव हाला र ?
अशिक्षा र गरीबीका कारण भाग्यवादमा विश्वास गर्ने जनसंख्या बढी छ । उनीहरू स्वर्थान्ध नेता र सामाजिक अव्यवस्थाका कारण हामी गरीब भयौं भन्ने अझै बुझ्दैनन् भने नेताहरू त बुझाउनै चाहँदैनन् । जनता जागरुक भएमा आफ्नो मनपरी चल्दैन भन्ने नेतालाई थाहा छ । त्यसैले जनतालाई छलछाम गरिरहन्छन्, भ्रममा पारिरहन चाहन्छन् । भाषणमा एउटा कुरा र काम अर्कै गर्छन् । आजसम्म यस्तै हुँदैआएको छ तापनि सधैं यसरी कामचल्ने छैन । ठीकसंग अघि बढ्ने हो भने नेताका काम गराइका ढाँचामा परिवर्तन ल्याउनैपर्छ । अब त जनताले नेताका भाषण सुन्ने मात्र होइन, कामै हेर्नेछन् ।
वैद्यजीलाई “रिङ्ग आउट गर्ने” खेलको परिणाम के ? - तारा सुवेदी (10.02.2013)
भारतको सहयोग, चीनको हस्तक्षेप ! - यादब देवकोटा (09.18.2013)
अराजक जातिवादी संकीर्णता - महेश्वर शर्मा (09.18.2013)
विधि विधान र कानून कसका लागि ? - तारा सुवेदी (09.18.2013)
संचार ग्रामलाई जग्गा - युवराज पाण्डे (09.18.2013)
युवालाई चुनौं मुलुक बनाऔं - यादब देवकोटा (09.10.2013)
निवृत्त अनुभवी जनशक्तिको सदुपयोग खै ? - तारा सुवेदी (09.10.2013)
प्रचण्डको प्रवचनमाथि विवेचना - महेश्वर शर्मा (09.10.2013)